About Us - China Kanaif TAPAKA FANTSONA Systerm Ltd
K & F ny asa fitoriana dia "Mba hamoronana fahatsapana an-trano tsara kokoa"! K & F foana aina fampandrosoana, ny tontolo iainana, angovo-mamonjy, azo antoka sy mety vokatra, mba hanome fanavaozam-baovao sy tsara kokoa ny fomba fiainana kolontsaina sy ny olona ary koa ny hanamora ny an'arivony fianakaviana hankafy ny fiainana sambatra kokoa. Mandritra izany fotoana izany, K & F dia tsara kokoa hanonitra ny mpiasa, mpiara-miombon'antoka, mpanana petrabola sy ny fiaraha-monina. Na izany aza, K & F mazava tsara dia mahafantatra fa raha tsy rehefa mpanjifa 'fahatsapana an-trano lasa tsara kokoa, dia afaka mampitombo tsara ny orinasa, ka amin' ny fihetseham-po ny an-trano dia ho tsara kokoa ihany koa!
▪Vision ny K & F-kaja mba ho voalohany tahan'ny orinasa! 1. mavitrika manatanteraka andraikitra ara-tsosialy ary koa hentitra hanatanteraka sy miezaka mihoatra vokatra madio, mpiasa andraikitra, ny tontolo iainana madio, madio hetra sy ny sisa; mitoetra amin'ny alalan'ny fitsipi-tsara ny finoana, ny fitondran-tena ara-tsosialy sy ny raharaham-barotra ny fitsipi-pitondrantena; miasa mavitrika amin'ny fifanampiana-bahoaka Mazava ho azy; 2. Standard fitantanana rafitra, miasa matotra fitantanana, tsara raharaham-barotra sy ny fampisehoana miavaka ekipa mpiasa; mba ho ohatra sy modely ny orinasa Shinoa; 3. Nampisy ny marika voalohany amin'ny fanaraha-maso ny afo Shinoa vokatra sy ny fifandraisana iraisam-pirenena sodina marika malaza; 4. Hanatratra ny fandreseny-fandreseny amin'ny toe-javatra mifandraika antoko: mpanjifa fahafaham-po, mpiara-miasa, mpiara-miasa, fiaraha-monina sy ny mpanana petrabola.
▪Values ​​ny K & F-Products, orinasa fitondran-tena sy ny toetrany. K & F tokony tsy manome vokatra tsara indrindra ny mpanjifa, fa koa ho kaja orinasa. Ankoatra izany, K & F tokony hanampy ny mpiasa hahazo fahaizana, tsy fivadihana sy ny fahombiazana, ka vokatra, ny fitondran-tena sy ny orinasa dia maneho ny toetrany dia K & F marika, manampy ny tsirairay ary tsy misy azo omen'ny amin'ny. Ihany rehefa telo dia afaka mampirisika ny tsirairay ny asa sy ny vinan'ny K & F ho tanteraka.
▪Spirit ny K & F-fanoloran-tena, ny fiaraha-miasa sy ny fianarana. -Baovao fanoloran-tena dia ny fitsipi-pitondran-tena; fanoloran-tena no fototry ny tafavoaka velona; fanoloran-tena dia fiarovana fahatsapana andraikitra, mpandraharaha fanahy sy ny heviny ny iraka; fanoloran-tena dia ny mandà asa tsizarizary sy misambo fahatsarany; fanoloran-tena dia ny manao ny tsara indrindra ianao, rehefa nanankinana zavatra iray, ary hiezaka hanao izay zavatra tsara amin'ny fomba tena tsara rehefa tsy nanankinana zavatra. Fiaraha-miasa, araka ny anarany dia midika, midika hoe fiarahana miasa, izay miresaka momba ny ambaratonga ambony kokoa ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa tsara kokoa. Fianarana no ilaina ho velona sy ny fampandrosoana, izay no fepetra takian'ny vanim-potoana sy ny ny loharanom-fanavaozana. Mpiara-miasa dia tokony ho karazana fianarana-individualizes, raha K & F tokony ho tonga fianarana-mirona fikambanana. Zava-baovao dia ny ain'ny iray orinasa sy ny loharanom-mifaninana ary koa ny tanjona farany ny fianarana. K & F Mampirisika tolo-kevitra fanatsarana sy tsy mahazatra nefa mahagaga eritreritra; K & F mandrisika hanahaka famoronana sy ny zava-bita tany am-boalohany. K & F tokony hitahiry nandà ny tenany, mba ho tsara kokoa mihoatra lavitra noho ny tenany.
▪Company Philosophy: 1. Style ny K & F: Rapid valinteninao sy ny zavatra avy hatrany! K & F tsy mety fialan-tsiny. Ao amin'io vanim-potoana miaraka amin'ny fifadian-kanina haingana, "miadana" dia midika hoe na inona na inona afa-tsy "miandry fahafatesana". Ka inona no mbola miandry? 3. telo fitsipika ny K & F: Tsy misy fitaka; tsy opportunism; tsy mifraody amin'ny hafa sy ny fitaovana! Ireo fitsipika telo dia telo andalana unbridgeable fampitandremana, izay ny tena fototra takiana amin'ny etikan'ny matihanina ny K & F ny mpiasa, zava-dehibe ny toetra sy ny fitsipika manan-danja ao anatin'ilay tsy fivadihana. 3. telo mitsara fepetra ho an'ny mitarika: na ny fitondran-tena tsy mahasoa ny orinasa fampandrosoana; na ny fitondran-tena no sahaza ny mitaiza mpanjifa 'tsy mivadika; na ny fitondran-tena dia manohana ny mahay mampifandanja tombontsoan'ny antoko tsirairay. 4. misaina fomba K & F: Isika no loharanon'ny zava-drehetra! 5. K & F ny finoan'i: Isika no tsara indrindra! 6. K & F ny toe-tsaina miasa: Ataovy ny tsara indrindra amin'ny filan'ny nofo feno! 7. K & F ny ekipa foto-kevitra: K & F iray ekipa, ary tsy misy afa-tsy "isika", fa tsy "ianao" na "izy"!